Burma Partnership » Burmese Government Urged to Investigate the Enforced Disappearance of Sumlut Roi Ja
By 124 Civil Society Organizations • October 28, 2014
4. All Arakan Students’ & Youths’ Congress
11. Bridge – Kachin
18. Community Youth Center – Karenni
33. Genuine People’s Servants
44. Justice and Peace Commission – Catholic Bishop Conference Myanmar
60. Kachin Women’s Association of Thailand
73. Karen Women’s Union
78. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (Nepal)
108. Tavoyan Women’s Union
120. Women’s Organizations Network Myanmar
အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် အတင်းအကျပ် ဖျောက်ဖျက်ခံရသော ဆွန်လွတ် ရွယ်ဂျာ အမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တိုက်တွန်းခြင်း။
ကချင်အမျိုးသမီး ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာ ဖျောက်ဖျက်ခံရမှုကို သေချာစွာ စုံစမ်းပေးရန်နှင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများကို လက်ရဖမ်းဆီးပေးရန် ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာကို အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး သုံးနှစ်ပြည့်သည့်အချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။
၂၀၁၁ ခု အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်က မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ခိုင်ဘန် ကျေးရွာအနီးရှိ တောင်ယာခင်းတွင် ရှိနေသော အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆွန်လွတ် ရွယ်ဂျာနှင့် ခင်ပွန်း၊ ယောက္ခမတို့ သုံးဦးကို မြန်မာ့တပ်မတော် အမှတ် ၃၂၁ ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ တပ်သားများက အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
သူတို့ သုံးယောက်သည် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟု မြန်မာ့ တပ်မတော် တပ်သားများက သံသယရှိနေခဲ့သည်။ မြန်မာ့ တပ်မတော်၏ရှေ့တန်း တပ်စခန်းရှိရာ မူဘွန် တောင်ပေါ်သို့ ပြောင်းဖူးများ သယ်ပို့ပေးရန် သူတို့ ၃ ယောက်ကို တပ်သားများက သေနတ်ဖြင့် ချိန်၍ ခိုင်းစေခဲ့သည်။ သူမ၏ ခင်ပွန်းနှင့် ယောက္ခမတို့က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားကြံစည်ခဲ့ကြပြီး တပ်သားများမှ သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်ချိန်တွင် ရှောင်တိမ်း ပြေးလွှားခဲ့ကြသည်။ ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာကို ဖျောက်ဖျက် မခံရမီအချိန်အထိ ထိုရှေ့တန်းစခန်းတွင် ရက်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။
ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာ၏ မိသားစုဝင်များသည် သူမဖျောက်ဖျက်ခံရမှုကို စုံစမ်းပေးရန်နှင့် အတင်းအဓမ္မ ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့သည့် စစ်သားများကို အမှုဖွင့်ပေးရန် အာဏာပိုင်များကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အသနားခံခဲ့ သော်လည်း အစိုးရတပ်မတော်နှင့်တကွ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တညီတညွတ်ထဲ ငြင်းဆိုခဲ့ ကြသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လတွင်မူ ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာ၏ ခင်ပွန်းက ၂ လ ခန့်တင်ကြို တင်သွင်းထားသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဆင့်ခေါ်စာကို မြန်မာ တရားရုံးတော်က ပယ်ချခဲ့သည်။ ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာမပျောက်ဆုံးခင်က သူမကို တပ်မတော်မှ ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးထားသည် ဆိုခြင်းမှာ သက်သေမရှိကြောင်း တရားရုံးက ပြောဆိုသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော် တာဝန်ရှိသူကလည်း သူမကို ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုသည်။ ဆွန်လွတ် ရွယ်ဂျာသည် ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကာ သေဆုံးပြီဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။
ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာ ပျောက်ဆုံးမှုသည် ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ပဋိပက္ခအတွင်း အရပ်သားများ ကို ပစ်မှတ်ထားနေခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်နေခြင်း၊ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ အပေါ် အကြမ်းဖက်ခြင်းတို့ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး ကျူးလွန် ချိုးဖောက်မှုများကို သိသာထင်ရှားစေသည်။ ၂၀၁၁ ဇွန်လမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်သည် မြန်မာ အစိုးရတပ်မတော်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုများအတွက် သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အနည်းဆုံး ၂၀ ခန့်သည် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဌအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းက သတ်မှတ်ထားသော လူတိုင်းသည် အသက်ရှင်ခွင့်၊ အချုပ်အနှောင် ကင်းလွတ်ခွင့်၊ အကာအကွယ်ရှိခွင့် ရှိရမည်။ အာဏာရှင်ဆန်သော ဖမ်းဆီးမှု၊ ချုပ်နှောင်မှု၊ အဓမ္မခေါ်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ်) အခြားသော လွပ်လပ်ခွင့်ကို ဖယ်ရှားစေသည့် လုပ်ရပ်မျိုးကို မည်သူမျှ ခံယူရခြင်းမရှိစေရ ဆိုသော သဘောတရားများကို မြှင့်တင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရပါက အခြေခံဥပဒေ သို့မဟုတ် ဥပဒေ အရ ထိထိရောက်ရောက် အဖြေရှာပေးနိုင်ရန် လူတိုင်းတွင် အခွင့်အရေး ရှိကြောင်း အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းက အသိအမှတ် ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုသည်မှာ-
ဆွန်လွတ်ရွယ်ဂျာ ပျောက်ဆုံးမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော လွတ်တော် ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းပေးရန်၊
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ရှာဖွေ၍ ရာထူး၊ အဆင့်အတန်းမရွေးဘဲ တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းစေရန်။
အတင်းအကျပ် ဖျောက်ဖျက်ခြင်းခံရသူများအား ကာကွယ်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပဋိဥာဉ် (ICPPED) ကို လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြု၍၊ (ICPPED) ပါ အချက်အလက်များကို စုစည်းပြီး အမျိုးသား ဥပဒေအဖြစ် ပြဌာန်းရေးကို ပထမဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန်
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဒေသများနှင့် အပစ်ရပ်ဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများကို အကြမ်းဖက်ခြင်း အပါ အ၀င် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအပေါ် လူသားခြင်းဆိုင်ရာ စာနာထောက်ထားမှု ကင်းမဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကို ချက်ခြင်း ရပ်တန့်ရန်။
Tags: Arbitrary Detention, ASEAN, ASEAN Human Rights Declaration, Burma Army, Extrajudicial Killing, Human Rights Violations, Kachin Independence Army, Sexual Violence, Sumlut Roi Ja, Violence Against Women